Ama-Bibs ezinja: kukho konke ukuthanda | Izinja Umhlaba
Ama-bhibs ezinja, awaziwa nangokuthi ama-harnesses, angenye yezinto eziyisisekelo zokuthatha inja yethu sihambe ngendlela ethokomele nephephile. Kukhona konke ukunambitheka nezidingo, ngakho-ke, noma kungaba nzima, uzogcina ngokuthola okukufanele kakhulu wena nenja yakho.
Kule ndatshana, Ngaphezu kokwethula ukukhethwa ngamamodeli ahlukene atholakalayo, sizokhuluma ngokuthi ngabe kuhle yini ukuthi inja yethu igqoke ibhibhi usuku lonke, impikiswano yama-harnesses wokudonsa noma izici zehhanisi elihle. Futhi, uma ufuna ukuqhubeka ungene kulesi sihloko, sincoma ukuthi ufunde le enye indatshana ekhuluma ngayo inja engcono kakhulu yokubopha: umhlahlandlela wokuqhathanisa nowokuthenga.
I-Lesure Dog Harness ...
I-PENGDA Inja Iboshwe Ngaphandle ...
Ukubopha Ngokwezifiso kwe...
rabbitgoo Bophela Izinja ...
1 Ibhayibheli elihle kakhulu lezinja
1.1 Ibhibhi elibomvu elimelana kakhulu
1.2 Ihhanisi elinethezekile lezinja ezinkulu
1.3 Ibhibhi elihle kakhulu
1.4 Isiqeshana Esiqinile
1.5 Amabhande ebhande lemoto
1.6 Ibhibhi lezinja elincane
1.7 Indwangu yendwangu yemoto
2 Ingabe kuhle inja yami ukugqoka ibhibhi layo usuku lonke?
3 Impikiswano yebhibhi yokulwa nokudonsa
4 Linjani ibhibhi elihle lezinja?
5 Ungathenga kuphi amabhibhi ezinja
Ibhayibheli elihle kakhulu lezinja
Ibhibhi elibomvu elimelana kakhulu
UJULIUS-K9 Amahhanisi ...
UJulius ungomunye wabakhiqizi bezinkanyezi bezinkinobho zezinja, into ebonakalayo emikhiqizweni yabo, ahlala enekhwalithi engcono kakhulu. Endabeni yamahhanisi azo, aqinile kakhulu, anehange lepulasitiki elingazweli kakhulu, iringi yangemuva lapho ungafaka khona i-leash nesibambo ukulawula inja yakho kangcono. Ngaphezu kwalokho, indwangu abayisebenzisayo, yize imelana kakhulu, ibuye ivumele isikhumba sijuluke; noma kunjalo, ayikwazi ukuba manzi njengoba ingangeni manzi. Ama-bhibs alo mkhiqizo afaka netafula kumhlahlandlela wabo wokuthenga ukuze uthole usayizi wenja yakho kalula futhi ngokushesha.
Noma kubiza kancane, I-Amazon isetshenziselwa ukwenza ukunikezwa ngalawa mahhanisi, ngakho-ke uma ungajahile qaphela ukonga imali ethile.
Ihhanisi elinethezekile lezinja ezinkulu
Leli hhanisi lenzelwe ukuthi inja yakho enkulu ikwazi ukuhamba ngokukhululeka. Inokuvalwa okuningi, phezulu nangaphansi, futhi igona isifuba senja ngokuqinile kodwa ngokukhululeka. Okunye ukuphawula kugcizelela ukuthi noma inja izama ukuyisusa, ibhayibheli elinamandla kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inemiphetho ekhanyayo ukuze ukwazi ukuthola kalula inja yakho. Kubandakanya ukubopha insimbi ngemuva nangaphambili, kanye nesibambo sokulawula inja kangcono.
Ibhibhi elihle kakhulu
I-Anbeer Harness ye ...
Uma kungaphezu kwenja unayo i-ratilla futhi ufuna ukuthi ibe isitayela ngaphezu kokunethezeka, le bhibhi kuzoba nzima ukuyishaya. Phakathi kwamaphethini ayo kunemisila emafwini, amaqabunga esundu, amakati e-unicorn nezinja ezinezibuko, njengoba ubona, lonke uhla lwama-cuties. Inosayizi abaningana futhi, yize enkulu kunazo zonke ifaka ukuvalwa okubili ngezingwegwe zepulasitiki, ezincane kunazo zonke ziyi-velcro. Le modeli ifaka nebhande ukuze ukwazi ukuthola isethi ephelele.
Le bhibhi yenzelwe ngokukhethekile izinja ezinkulu. Inama-leashes amelana nawo, angahle aguqulelwe kalula enjeni yakho (siyakhumbula, njengenjwayelo, ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe kahle usayizi). Ngaphezu kwengwegwe yensimbi yokubamba ibhande, inendwangu engazweli futhi ephefumulekayo, enombala ogqamile nephethini ngaphambili. Le modeli ifaka phakathi umgexo wesipho.
Uma ukhetha le modeli ngenxa yombala noma umdwebo, khumbula ukuthi amanye amazwana athi umkhiqizo ufike kuwo ngombala ohlukile.
Amabhande ebhande lemoto
Uma ungomunye walabo abathatha isilwane sakho ohambweni lapho kufanele uhambe khona ngemoto, i-harness nebhande, eyenzelwe leli cala, ilungile. Le modeli ifaka ibhande lokunwebeka elixhunywe emotweni (kubhande “elijwayelekile” lebhande kanye nasehhanisini. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha kusuka kumamodeli nobukhulu obuhlukahlukene.
Ibhibhi lezinja elincane
Enye yezinketho phakathi kwama-bibs athengiswa kakhulu e-Amazon futhi enzelwe izinja ezincane kunazo zonke le modeli, imelana njengamahhanisi ezinja ezinkulu. Ibhibhi igona isifuba nangemuva, inezingwegwe ezimbili (ngaphambili nangemuva) nemibala eminingi ongakhetha kuyo. Izibuyekezo ziqokomisa ukunethezeka kwayo, ngenxa yendwangu eboshwe, nokuthi kulula kanjani ukugqoka nokukhumula.
Indwangu yendwangu yemoto
I-Pawaboo Belt ...
Futhi sigcina sesinezinye ibhibhi ukuphatha inja yethu ngokunethezeka futhi iphephile lapho sihamba ngemoto. Into ethokozisayo ngale modeli ukuthi ibhande elifakiwe nebhibhi ' noma uma kwenzeka ukuthi i-buckle ingahambelani ne-hitch yemoto.
Ingabe kuhle inja yami ukugqoka ibhibhi layo usuku lonke?
Ngaphandle kokungabaza, ama-dog bib awusizo kakhulu, njengoba sishilo kwezinye izikhathi, angcono kakhulu kunamakhola ukuhamba isilwane sethu, ngoba bagwema izinkinga zangomuso nezasemuva zesikhathi esizayo futhi, ngaphezu kwalokho, kubuye kukhululeke kakhudlwana kubo kunekhola, ngoba inkinga yokubaminza lapho bedonsa leash iyanyamalala.
Ekuqaleni, akufanele kube nezinkinga uma ufuna ukushiya inja yakho iboshwe amahhanisi isikhathi eside (inqobo nje uma unethezekile nayo, ilungiswe kahle futhi ayicasuli isikhumba sakho, kunjalo), kodwa ungalokothi usuku lonke. Esikhundleni salokho, gcina okulandelayo engqondweni:
Susa amahanisi ebusuku noma lapho eshiywe yedwa ukugwema ukwethuka, ngoba angaklinya ibhibhi lakhe ngaphandle kokuthi wena unake.
Ungalokothi ushiye inja yakho ngehhanisi elimanzi ukugqoka isikhathi eside, kubi esikhunjeni (futhi akumnandi neze).
Yize kukhululekile kakhulu ukugqoka njalo amahanisi, isikhumba sesilwane sakho sidinga nokuphefumula nomoya, yingakho kubalulekile ukuyikhumula ngezikhathi ezithile.
Ekugcineni, kunconywa kakhulu ukuthi pamper ikakhulukazi indawo lapho i-bib ixhumana ngayo nebhulashi okungenani kabili ngesonto ukuvimbela ukucasuka kwesikhumba noma ukulahleka kwezinwele.
Impikiswano yebhibhi yokulwa nokudonsa
Ama-harnesses wokudonsa, lawo enzelwe ukuthi imilenze yenja ingakwazi ukunyakaza uma udonsela ku-leashBabelokhu besesweni lesiphepho muva nje. Ngakolunye uhlangothi, kukhona abaqeqeshi kanye nochwepheshe ekuziphatheni kwezinja abazithatha njengezinokuhle, noma okungenani ububi obuncane, kanti abanye ochwepheshe, njengodokotela bezilwane, bababona njengokuthile okufanele bakugweme.
Isibonelo, enye yezimpikiswano eziphikisayo ithi ama-bhibhi ayingozi kuzo zonke izinja, ikakhulukazi lezo ezenza imisebenzi yezemidlalo, kusukela ngokungeyikho usabalalise isisindo senja kusuka ngaphambili kuya emilenzeni engemuva. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kungadala izinkinga zempilo. Ngokusho kwabahoxisi behhanisi, labo abafaka iringi lapho ibhande libekwe khona ngaphambili bayingozi kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, abanye ochwepheshe bathi amahhanisi alolu hlobo ayindlela engcono kakhulu, noma okungenani enonya, yokufundisa isilwane sethu ukuhamba ngaphandle kokudonsa leash.
Kunoma ikuphi, njengokujwayelekile, impendulo kwesinye isikhathi incike enjeni yethuYingakho kungcono ukuthumela ukungabaza nemibuzo yalolu hlobo kudokotela wezilwane wethu.
Linjani ibhibhi elihle lezinja?
Uma kwenzeka ucabanga ukuthenga inja yakho ibhibhi, ungahle umangale ngakho konke ukunikezwa okutholakalayo, okuba kukhulu. Ngakho-ke, ungacabanga ngezici ezijwayelekile ezilandelayo ezikhona ngehhanisi elihle:
Okokuqala, kulungile ukubheka i-harness, isibonelo, ukuthi idizayini ivumela inja ukuthi ihambise kahle imilenze yayo.
La ikhwalithi (kungaba ngenxa yomkhiqizo noma ngenxa yokuthi inamavoti amaningi amahle, ngokwesibonelo) kubaluleke kakhulu futhi ukuthi kuqinisekiswe ukuthi yakhiwe kahle nokuthi ngeke ivuleke.
Kungcono ukukhetha i-harness kune- ungayifaki indandatho lapho ibhande liboshwe khona ngaphambili.
Qiniseka ukuthi usayizi ulungile: enye indlela yokwazi ukubheka ukuthi singakwazi yini ukufaka iminwe emibili phakathi kwehhanisi nenja.
Ekugcineni, khetha okokuphefumula ukuze ungalimazi isikhumba sesilwane sakho.
Ungathenga kuphi amabhibhi ezinja
Kunezindawo eziningi ongathenga kuzo ama-dog bibs ngamamodeli amaningi athakazelisayo azokwenza impilo yakho ibe lula futhi ibe ntofontofo. Ngokwesibonelo:
En Amazon Kunamamodeli angapheli futhi, ngaphezu kwalokho, baya nawo ekhaya mahhala uma unenketho ye-Prime. Ungaqondiswa yimibono yabasebenzisi futhi ubone nokuthi izinja zabo zibukeka kanjani ngenxa yezithombe ezingaxhonywa nomkhiqizo, into ewusizo kakhulu lapho wenza isinqumo.
En izitolo ezikhethekile njengoTiendaAnimal noKiwoko uzothola ukuhlukahluka okuncane, kepha ungabona mathupha ukuthi imuphi imodeli ekufanele kakhulu wena nenja yakho. Ngaphezu kwalokho, uma kukhululeke kakhudlwana kuwe, ungenza ukuthengwa ku-inthanethi.
Amahhanisi ayatholakala nge izindawo ezinkulu, yize zingaveleli ngokuhlukahluka kwazo noma ngekhwalithi yazo ephezulu. Kungakho kunconywa kakhulu ukuthi ukhethe isitolo esikhethekile, lapho, ngaphezu kwalokho, izeluleko kungenzeka ukuthi zifaneleke kakhulu.
Akungabazeki ukuthi kunezinhlobo zamabhayibhi ezinikezwa yizinja futhi zithathe, ngakho-ke kwesinye isikhathi kunzima ukuthola elifanele thina nenja yethu. Ake usitshele ukuthi yiliphi ihembe olincomayo noma eligqokwa yinja yakho? Ucabangani ngama-anti-pull harnesses?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ama-Bib wezinja: ngakho konke ukuthanda